Google Maps agaghị ekwe ka ịfere ebe njem njem ọhaneze gị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Google Maps bụ otu n'ime ngwa ịntanetị kachasị eji mee ihe. Kemgbe ọ bịara na 2005, ngwa ọrụ agbanweela usoro na ndozi dị iche iche. Ya imewe na nso nso a redesigned na ugbu a, a na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ ahụ na-ejikarị njem ọha na eze eme ihe ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ mee njem nlegharị na achọghị ịhapụ ụgbọ ala ha, ụgbọ oloko ma ọ bụ metro na-akwụsị.
Site na mmelite kachasị ọhụrụ nke Google Maps - maka gam akporo ugbu a - ugbu a Ọ ga - enyere gị aka ịmụta usoro ọ bụla ị ga - esi mee njem kwa ụbọchị site na iji ụgbọ njem ọha. Na mgbakwunye, ihe na-adọrọ mmasị bụ na ọkwa ndị a ga-arụ ọrụ ọbụlagodi na ihuenyo ekpochi ma ọ bụ n'oge ogbugbu nke ngwa ndị ọzọ: ịgụ akụkọ, akwụkwọ elektrọnik, ịga na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ikiri vidiyo na YouTube ma ọ bụ Netflix.
Notma Ọkwa ga-egosi dị ka ificationsma Ọkwa na ihuenyo n'agbanyeghị ebe ị nọ n'oge ahụ. N'ụzọ dị otú a onye ọrụ ahụ ga-ama mgbe ọ bụla nkwụsị na-esote yana mgbe ị ga-esi n'ụgbọ okporo ígwè, bọs ma ọ bụ metro. Ọ bụ ezie na anyị amaghị mgbe "Nzọụkwụ site na nzọụkwụ" maka iPhone ga-adị, ọ bụ eziokwu na ọrụ nke mgbe nkwụsị gị rutere dị maka iOS. N'ezie, Na ọkwa mmapụta ọ bụla, a na-enye onye ọrụ ohere ịpị ya na ibugharị ya na isi ngwa iji nweta ozi zuru ezu n'ụzọ ị ga-eso.
N'aka nke ọzọ, anyị amaghị n'ezie etu ọ ga-esi rụọ ọrụ n'ụgbọ njem ọha na-arụ ọrụ na nzuzo. Ọzọkwa, ozi GPS nke akụrụngwa anyị ga-enwe ntụkwasị obi kpamkpam? A ga-egbu oge na-arụ ọrụ? Ihe ndị a bụ ụfọdụ n’ime amaghị ihe ha na-echeta. Otú ọ dị, Google Maps na-aga n'ihu na-abụ onye ndu a na-agbagha agbagha na ọrụ geolocation, ma na-eji moto ma ije.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Google Maps agaghị ekwe ka ịfere ebe njem ụgbọ njem gị na-abịa n'ihu
Ọ bụ ihe na-iju m anya oge niile na etinyeghị ya. Achọpụtara m na ọ bara uru dị ukwuu mgbe m na-atụle ịba bọs na obodo amaghị.